Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil » Brazil nwere ọcụ na nzukọ na Expo Dubai 2020
Airlines • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE
Onye isi oche nke Embratur (Agencylọ ọrụ Brazil maka nkwalite njem nlegharị anya mba ụwa), Carlos Brito, na onye minista na -ahụ maka njem, Gilson Machado Neto, onye isi oche nke ụgbọ elu Emirates, Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum nabatara ya na Ọktọba 3, 2021. The Ebumnuche nke nzukọ a, nke a na -eme n'oge Expo Dubai 2020, bụ ịbawanye njikọ nke ụgbọ elu na -abịa Brazil site na Dubai na ọdụ ụgbọ mmiri Emirates ndị ọzọ, na -elekwasị anya na Amazon na Northeast Brazil.
Enwere ụgbọ elu 110 ugbu a gburugburu ụwa site na São Paulo nke Emirates nyere.
Ozugbo ụgbọ elu Emirates ndị ọzọ rutere Brazil, Brazil ga -ebido mkpọsa mgbasa ozi iji kwalite ebe ndị Brazil na UAE na isi obodo mba ụwa ndị ọzọ.
Expo Dubai 2020 nwere ntinye aka nke mba 190 yana ndị na -ege ntị ihe ruru nde mmadụ 25 maka oge ihe omume a.
Site na São Paulo, Emirates na -enye ụgbọ elu 110 ugbu a gburugburu ụwa. “Ndị nwetagoro ohere ịnọ n'ụgbọ elu Emirates nwere ike gosi ịnụ ọkụ n'obi nke ha ji emeso ndị njem, yana ụgbọ elu na ọrụ ọgbara ọhụrụ na -eme ahụmịhe nke ịnya ụgbọ elu. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ malitere inye ọtụtụ ebe ndị Brazil, anyị ji n'aka na ọ ga -adị elu. Ọ ga -abawanye ọnụ ọgụgụ ndị njem mba ofesi na -abata na mba anyị, ”Minista Gilson Machado Neto kwuru.
Onye isi ala nke Nwee obi ụtọ na Mịnịsta na -ahụ maka njem na -egosi Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum na ozugbo ụgbọ elu Emirates rutere Brazil, Brazil ga -ebido mkpọsa mgbasa ozi iji kwalite ebe ndị Brazil na United Arab Emirates na isi mba ụwa ndị ọzọ. Minista a kọwara, "itinye ego anyị maka ịtinye ngwaahịa na ebe ndị Brazil ga -eduga n'omume mmekọrịta mmekọrịta ya na azụmaahịa mpaghara, dịka ọzụzụ, okpokoro okirikiri azụmaahịa, ezumike ezinụlọ, na mgbakwunye na omume ndị ọha ikpeazụ."
Na nraranye nke Pavilion Brazil na Expo Dubai 2020, Onye isi ala Embratur, Carlos Brito, gosipụtara mkpa Brazil sonyere n'ihe omume dịka Expo Dubai. “Nkwalite mba anyị na mba ofesi dị mkpa karịa na ọnọdụ a nke ịbawanye ọgwụ mgbochi ọrịa na ịmalite njem ọzọ. Ụwa chọrọ ma kwesị ịma njem nlegharị anya anyị, ”ka o kwuru. N'ime mmemme ndị Embratur na Ministry of Tourism zubere maka ngosi a bụ ịnabata ndị ọbịa, mmemme omenala, ihe ngosi nwere onyonyo na aka, egwu na ịgba egwu nke mpaghara Brazil niile. Na mgbakwunye, Embratur na -ahazikwa mmemme maka ahụmịhe ika iji bulie mmekọrịta ya na ndị ọbịa wee kesaa ihe nkwado.
Onye isi ala Embratur Carlos Brito
Onye isi ala Embratur na Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya hazikwara nzukọ na ndị nnọchi anya mba ụwa n'oge ngosi ahụ, gụnyere nyocha ya na osote onye isi ala na onye minista mmepe akụ na ụba na teknụzụ Slovenia, Zdravko Počivalšek, na odeakwụkwọ njem nlegharị anya San Marino Frederico Amati. Ekwesịrị ịbịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta n'etiti Brazil na Slovenia n'oge ntinye aka nke Embratur na Ministry of Tourism na "Izu nke Brazil," nke emere n'etiti Nọvemba 9 ruo 15, na Expo Dubai 2020.
Omume Embratur (Agencylọ Ọrụ Brazil maka Nkwalite Mba Nleta Mba Nile) na -anọchite anya njem nlegharị anya Brazil na Expo Dubai 2020. Ugboro abụọ, ụlọ ọrụ ahụ na -ewere ihe nkiri Brazil na -ewu ewu na United Arab Emirates: na mmeghe, n'etiti Ọktọba 1 na 9. , nakwa n’izu Brazil, malite na November 9-15. A na -eme ya afọ ise ọ bụla wee lelee ya dị ka otu n'ime ihe omume kachasị mkpa n'ụwa, Expos World nwere nnukwu mkpa maka ngosi mba. Ha lekwasịrị anya na imepụta ihe ọhụrụ na imepụta azụmahịa. Yigharịrị site n'afọ gara aga n'ihi ọrịa COVID-19, Ngosi Dubai 2020, nke yigharịrị n'ihi COVID-19 ma na-eme ya site na Ọktọba 1, 2021 ruo Machị 31, 2022, nwere mba 190 na ndị na-ege ntị ruru ihe ruru nde mmadụ 25 maka ọnwa isii nke ihe omume ahụ.